Mahiga: Shirka Nairobi wuu Qabsoomayaa
Ergayga gaarka ah ee XGQM, Augustine Mahiga ayaa sheegay in la qabanayo shirka Nairobi, isagoo ugu baaqay madaxda Soomaalida inay ka soo qeybgalaan.
Wakiilka gaarka ah ee Xogahaya Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Augustine Mahiga ayaa sheegay in 12-ka iyo 13-ka bishan April magaalada Nairobi lagu qaban doono kulan wadatashi ah oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya.
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Mahiga ee Nairobi ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada masuuliyiinta Soomaalida iney ka soo qeybtalaan shirkaasi.
“Waa waajib i saaran sida uu qabo heshiiskii Djibouti inaan fududeeyo wada hadal dhex mara hay’addaha Soomaalida iyo masuuliyiintooda” ayuu yiri Mr. Mahiga oo qoraal ka soo saaray xafiiskiisa magaalada Nairobi.
Waxaa qoraalka lagu xusay in muhimadda Shirka Nairobi looga tashanayo arrimaha Soomaaliya uusan aheyn in go’aamo lagu gaaro, balse uu yahay mid lagu xoojinayo wadahadal dhex mara masuuliyiinta Soomaaliya si ay u abuuraan aragti guud oo horey loogu sii riixayo hawlaha dalka.
Mahiga wuxuu sheegay in beesha caalamku keliya goob joog ka noqoneyso shirka oo aysan ka qeyb qaadan doonin, iyadoo doorkooduna noqon doono oo kaliya mid ay ku doonayaan inay fikrado cad-cad ka helaan hawlaha horyaala Hay’addaha dastuuriga ah ee Soomaaliya iyo sida loo soo afmeeri lahaa xilliga kala guurka ee ku asteeysan Axdi Qarameedka KMG ah iyo heshiikii shirkii Jabuuti.
Mahiga wuxuu xusay in shirka Nairobi uu fursad u yahay hoggaamiyaasha Soomaalida si ay ula wadaagaan dalalka saaxibka la ah ee gobolka iyo beesha caalamka sida loo taageeri karo howlaha ku aadan waqtiga kala guurka.
Mahiga wuxuu carabka ku dhuftay in shirka wadatashiga ah ee Nairobi uu u gogol xaarayo si dib boorka looga jafo guddiga heerka sare ah ee ka shaqeeya hirgelinta waxyaabihii ku xusnaa shirkii Jabuuti ee ku baaqayay horumarinta wadahadal dhexmara Soomaalida, dib u heshiisiin iyo in lala hadlo dhamaan dhinacyada ku lugta leh siyaasadda Soomaaliya.
War-saxaafadeedkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dowladda KMG ee Soomaaliya ay diiday ka qeybgalka shirka Nairbobi, sidoo kale dowladda Jabuuti ayaa ka hortimid shirkaasi, iyadoo sheegtay inuu dhaawacayo hannaankii dowladdnimo ee ay Soomaalidu ku soo heshiiyeen.